5 Tilmaamaha Hagaajinta Emailka ee Kordhinta oo Guji | Martech Zone
5 Tilmaamaha Hagaajinta Emailka ee Kordhinta iyo Guji
Talaado, Febraayo 3, 2015 Arbacada, February 4, 2015 Douglas Karr
Kuma helayo wax badan oo ka fudud tan xog-ururintan ka socota ContentLEAD Rajada waxaa ku soo qulqulaya emaylka sababo la xiriira qiimaha hooseeya ee macdanta ledhka iyo heerka beddelka sare. Laakiin taasi waxay muujineysaa dhibaato weyn huge e-maylkaaga ayaa ku lumay sanduuqaaga boqolaal ama kumanaan fariimo kale oo suuqgeyn riix ah.
Maxaad sameyn kartaa si aad u kala soocdo isgaarsiinta emaylkaaga ee dadka badan? Halkan waxaa ah 5 walxood oo ku dhex jira anatomy ee fariinta iimaylka oo ay weheliso saameynta ay ku habboonaanta yeelan karto:
Khadadka maadada oo kooban waxay keeni kartaa 20% sicirka furan celcelis ahaan.
Salaan Shakhsiyeed waxay keeni kartaa 129% heerarka gujinaya-sare.
Wadahadal Aan Shirkad Laheyn waxay keeni kartaa 24% qasabno dheeri ah.
Kudar Sawiro waayo, 82% ayaa kordhay dareenka.
Kala qaybsan farriimaha iyo dhagaystayaashu u horseedaan 50% qasabno dheeri ah.
Sababtoo ah ololeyaasha emaylku waa kuwo waxtar leh, ku dhowaad nooc kasta ayaa adeegsada. Sanduuqyada 'rajada' waxaa ku qulqulaya emayllada shirkadaha iyo macaamiishaadu waa inay kala saaraan farriimaha qiimaha leh ee ka yimaada spam. Infographic-kaani wuxuu ku siinayaa inaad si dhakhso leh u fiiriso anatomy-ka fariinta e-mayl ee guuleysta si aad ugu keento waxqabadyada ugu guulaha badan waxyaabaha aad la wadaagto dhagaystayaashaada. Nuxurka
Tags: hadal shirkadeedemail guji ilaa heerkaemayl sicir-riixguji emailsawirada emaylkaemaylka furanemaylka ayaa furmayahagaajinta emaylkaqaybinta emaylkakhadadka mawduuca emaylkahadal dadnimo lehsalaan shaqsiyeed
Xagee martidu ku riixdaan Blog?
10 Horumarineed oo Aad Ku Hirgelin Kareyso Suuqgeynta Bulshada Maanta!